Mastodon: Nhọrọ ọzọ, emeghe na oge a na Twitter | Site na Linux
Mastodon: Nhọrọ, Mepee na Oge Ọzọ na Twitter
Oge ndị a nke ụwa dum site na GOVKWUO-19 (Coronavirus 2019 / SARS-CoV-2), gbakwunyere na perennial ihe na omume, iji na-emetụta ndị nnọpụiche net, maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọrịta mmadụ na ibe, agha, akụ na ụba (mgbochi, mmachi); site na Gọọmentị ma ọ bụ ụlọ ọrụ nye Ọchịchị ndị ọzọ, Otu na Ọha; kwa ụbọchị ndị ọzọ ọrụ nke Ntanetị Intanet Worldwa, na-akpali ma ọ bụ manye ha ịchọ nkwukọrịta ndị ọzọ, dabere ma ọ bụ kwado ya free, oghe na / ma ọ bụ decentralized nkwukọrịta nyiwe, iji nweta isi iyi ka mma ma ọ bụ ọwa ozi na / ma ọ bụ akụkọ.
Y Mastodon bụ otu n'ime ndị ọzọ ahụ n'efu, mepee ma / ma ọ bụ nke ekwesighi dị maka nzube ahụ. Ọ bụ ezie, karịsịa Mastodon na-azọ Twitter, ọ bụ n'ezie akụkụ nke usoro okike buru ibu nke jupụtara n'ọtụtụ atụmatụ ma ọ bụ uru. Ya mere, ọtụtụ oge a na-ewerekwa ya a Netwọk mmekọrịta nke na-ama Facebook aka.
Como Mastodon, enwere netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ na / ma ọ bụ nyiwe ọrụ n'efu, mepee ma / ma ọ bụ nke ekwesighi, nke nwere ike iji ọfụfụ kwaghari na netwọkụ mmekọrịta ọha na ama na / ma ọ bụ ọrụ, nkeonwe na nke mechiri emechi nke anyị na-eji ọtụtụ.
Naanị iji kwuo ole na ole, anyị nwere Nsogbu, nke anyị kwurula banyere ya n'oge ndị ọzọ, n'akwụkwọ a kpọrọ: "Disroot: Ntọala n'efu, nkeonwe na nchekwa maka ọrụ ịntanetị". Anyị nwekwara ike ikwu PeerTube u Mepee iji dochie anya YouTubenwere Mgbasa, Enyi o Scuttlebutt nke iji dochie anya Facebook, na mgbakwunye na PixelFed y Piconic iji dochie anya Instagram.
Na mgbakwunye, anyị na-akwado ịgụ banyere Mgbasa ozi gbasaara na sava kwurula y Ngwa izi ozi, mbipụta ndị metụtara isiokwu ndị a. Ma n'ezie, ị gaghị echefu nkwanye anyị iji dochie WhatsApp site na Telegram ma ọ bụ Mgbama.
1 Mastodon: Ntanetị mmekọrịta ọha na eze na-akwụghị ụgwọ
1.1 Ndebanye aha na inye onyinye
Mastodon: Ntanetị mmekọrịta ọha na eze na-akwụghị ụgwọ
Dị ka onyinyo dị n'elu ederede na-egosi anyị, nke ewere n'oge ịmepụta akwụkwọ a, Mastodon bu Microblogging Social Network nke ahụ nwere Ndị ọrụ 512.488, ndị bipụtara karịa Nde 21 nde ma ọ bụ «Tooteos».
Otú ọ dị, n'onwe ya Mastodon website ọrụ Ha na-akwalite onwe ha ma jiri ozi ndị a kọwaa onwe ha:
"Soro ndị enyi gị ma chọpụta ndị ọhụrụ sitere na ihe karịrị nde mmadụ 4,4. Debe ihe niile ịchọrọ: njikọ, foto, ederede, vidiyo. Ihe niile n’elu ikpo okwu nke nwere obodo ma nwekwaa mgbasa ozi".
"Yiri ka ịde blọgụ bụ omume nke ikenye mmelite na weebụsaịtị, microblogging bụ omume nke ikenye obere mmelite na ntanetị nke mmelite na profaịlụ gị. Can nwere ike bipụta ederede ederede ma tinye mgbakwunye dị ka onyonyo, ọdịyo, vidiyo, ma ọ bụ nyocha. Mastodon na-ahapụ gị ịgbaso ndị enyi gị ma chọpụta ndị ọhụụ".
Iji malite mara na-eji bliss Ngbanye ọhaneze anyị nwere ike tinye njikọ ndị a Jikọọ Mastodon ma si otú a malite ịbụ akụkụ nke nnukwu Obodo ahụ. Na ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịnweta gị Ngalaba Akwụkwọ ederede ma ọ bụ gụọ ọ bụghị otú ahụ akwụkwọ ochie anyị banyere Mastodon, ebe anyi banyere n'ime ya n'uju.
Ndebanye aha na inye onyinye
Cheta na mgbe ị debanyere aha, ị nwere ndepụta nke sava ndị dị na netwọk ahụ, yana ohere ịhọrọ ya isiokwu na asụsụ ị chọrọ hazi. Ndepụta ndị a na-egosikarị ọnụọgụ ndị ọrụ ha nwere. N'ime sava ndị a bụ ama ama "Mastodon.social", nke bu ihe nkesa izizi ka emebere na ikpo okwu.
Na ngwụcha, echefula, ma ị bụ onye, ​​nzukọ ma ọ bụ gọọmentị, nye aka na Mastodon Project ma ọ bụ iji rụkọta ọrụ na akụrụngwa, ka ọ nwee ike ịga n'ihu ma too, maka abamuru nke mmadụ niile.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Mastodon», nke bu otu n’ime otutu «Redes Sociales libres y abiertas» dị na ;ntanetị; na-enye ọtụtụ ohere ịmara ha na / ma ọ bụ bụrụ onye otu n'ime ha ka ha nwee ike ịchịkọta iji ha eme ihe ma jiri uru ha bara karịa otu ha. «Redes Sociales privativas y cerradas»; ma e wezụga ịbụ, ọtụtụ mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Mastodon: Nhọrọ, Mepee na Oge Ọzọ na Twitter
Ubuntu 20.04 "Focal Fossa" beta dị maka ule
Mbugharị anaghị akwado izo ya ezo